जापानी ग्रीष्मकालको मजा कसरी लिने! चाडपर्व, आतिशबाजी, समुद्र तट, होक्काइडो आदि - Best of Japan
जापानमा गर्मी धेरै तातो छ। यद्यपि जापानमा अझै पनि परम्परागत ग्रीष्म alsतु र ठूला आतिशबाजी उत्सवहरू छन्। यदि तपाईं उत्तरमा होक्काइडो वा होन्शुका पर्वतहरूमा जानुभयो भने, तपाईंलाई फूलहरूले भरिएको अद्भुत मैदानहरू स्वागत गरिनेछ। आश्चर्यजनक सुन्दर समुद्री तटहरू पनि यो मौसममा भ्रमण गर्न आकर्षक क्षेत्रहरू छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईलाई जापान मा गर्मी को मजा लिन सक्छन् कसरी वर्णन गर्दछ।
जुलाईदेखि अगस्ट सम्म जापान एकदम होचो छ, होक्काइडो र केही हिमाली क्षेत्र बाहेक। त्यसैले आधारभूत रूपमा, म जापानको होक्काइडो र अन्य बाहेक ग्रीष्मकालीन यात्राहरूको सिफारिश गर्न सक्दिन। तर यदि तपाइँ चाडहरू मनपराउनुहुन्छ भने, त्यसो त गर्मी मा जापान आउन मजा लाग्न सक्छ। त्यहाँ धेरै आश्चर्यजनक छन् ...
जुन, जुलाई, अगस्टमा जापानमा यात्राको लागि सिफारिश गरिएको
जापानमा गर्मी चाडहरूको आनन्द लिनुहोस्
होक्काइडो वा होन्शु पठारमा आराम गरीरहेको छ
ओकिनावाको सुन्दर तटहरूमा समय खर्च गर्नुहोस्
गर्मी मा जापान भ्रमण गर्दा बाहिरबाट हेर्नु पर्ने कुराहरू
म जापानी गर्मी को हरेक महिना को लागी लेखहरु भेला। यदि तपाईं अधिक विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं जापानका मानिसहरूले ग्रीष्म whatतुमा कस्तो खालका लुगाहरू पहिरिएका छन् भन्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंको बारेमा रमाइलोको लागि यस विषयमा लेख पनि लेखें।
जापानमा जुन जुनमा धेरै वर्षा हुन्छ। जुन वसन्त summerतु देखि गर्मी सम्मको संक्रमण अवधि हो। त्यस कारणका लागि, म यात्राको लागि समयको रूपमा जून सिफारिश गर्दिन। यद्यपि, वर्षाको दिनमा दुबै मन्दिर र मन्दिरहरू शान्त र धेरै शान्त छन्। जुनमा, hydrangeas मन्दिर र मन्दिरहरूमा खिल हुनेछ। यदि तपाइँ जुनमा यस्ता स्थानहरूमा जानुहुन्छ, तपाइँ निश्चय पनि तपाइँको दिमाग शान्त पार्नुहुनेछ। सामग्रीको तालिका जूनमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो को सूचना अधिक जानकारीको लागि तलको स्लाइडरमा छवि। म शान्त मन्दिर र मन्दिरहरूको भ्रमण गर्ने सल्लाह दिन्छु। JIzo निलो बिब संग मिगेट्सिन मन्दिर कानागावा, जापान = शटरस्टकमा म जुनमा कामकुरा मन्दिरहरू पर्यटन आकर्षणको रूपमा सिफारिश गर्दछु। कामकुरा टोक्यो शहरको केन्द्रबाट ट्रेन बाट करिब एक घण्टा टाढा छ। मीगेत्सुइन मन्दिर र हसेदेरा मन्दिर विशेष रूपमा सिफारिस गरिन्छ। हाइड्रान्जियसको असंख्य हजारौं यी मन्दिरहरूमा प्रत्येक वर्ष जूनमा खिलछन्। यस पृष्ठमा शीर्ष फोटो Meigetsuin मा लिइएको थियो। यदि तपाईं क्योटोको मन्दिरहरूमा हाइड्रान्जाहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं मिमूरोटोजी मन्दिरमा जानुहोस्। मीमुरोटोजी यसको सुन्दर हाइड्रेंजिया बगैंचाको लागि प्रसिद्ध छ। बगैचा जुनको सुरुदेखि जुलाईको सुरूसम्म वरिपरि प्रत्येक वर्ष खुल्छ। तल मीमोटोरोजीको बगैंचाको विशेषता रहेको एक भिडियो छ। हाइड्रान्जस जूनको मध्यदेखि सुरुदेखि होन्शुका मुख्य शहरहरूमा खिलछन्।
जुलाई को महीनामा जापान मा कहीं पनि मौसम तातो छ! जुलाई जुलाई पछि, दिनको अवधिमा अधिकतम साम्राज्य प्राय: 35 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी जान्छ। यदि तपाईं जुलाईको अवधिमा जापानमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया सावधानी अपनाउनुहोला कि घरमै हुँदा तपाईंलाई न्यानो स्ट्रोकको खतरा हुन सक्छ। यस पृष्ठमा, म जुलाईमा जापानको तपाईको यात्राको लागि उपयोगी जानकारी दिनेछु। सामग्रीको तालिका जुलाईमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको सूचना कृपया कृपया आउटडोर तातो र इनडोर चिसोबाट सावधान हुनुहोस् होइकाइडो र होन्शुको टापुबाट सावधान हुनुहोस् जुलाईमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडो जानको लागि योजना बनाउनु भयो भने टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जानुहोस् जुलाईमा, कृपया तलका स्लाइडरमा थप जानकारीका लागि छवि क्लिक गर्नुहोस्। कृपया आउटडोर तातो र इनडोर चिसोका बारे सावधान हुनुहोस् जापानमा, जुलाईको पहिलो आधा तुलनात्मक रूपमा वर्षा हुन्छ। जुनदेखि वर्षायाम प्रायः निम्न महिनामा जारी रहन्छ। तर जुलाईको पछिल्लो मौसममा सुधार हुनेछ र दिनमा यो सफा र घाम लाग्ने छ। दिनको अधिकतम तापक्रम हरेक दिन degrees० डिग्री भन्दा बढि हुन्छ र रातमा पनि यो २ 25 भन्दा तल झर्दैन। अर्कोतर्फ, वातानुकूलित भवनहरूमा वायु धेरै चिसो हुन्छ। यस कारणले, केही मानिसहरूलाई कठोर तापमान परिवर्तनको कारण अस्वस्थ महसुस हुन सक्छ। यदि तपाईं सजिलै चिसो हुनुभयो भने, म सुझाव दिन्छु कि तपाईं कार्डिगन वा त्यस्तै कपडाको सामानहरू घर भित्र लगाउनका लागि ल्याउनुहोस् ताकि यो तपाईंलाई नहोस्। दिनमा, कृपया पानी पिउनुहोस् ...
जापानमा जुलाईको जस्तै मौसम पनि एकदम तातो छ। यसका अतिरिक्त टाइफुनहरू प्राय: आक्रमण गर्दछन्। यदि तपाई अगस्तमा जापान मा यात्रा गर्ने योजना बनाउनु हुन्छ भने, म तपाईलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई धेरै यात्रा कार्यक्रममा नजानुहोस्। यस पृष्ठमा, म अगस्तमा जापानको यात्रा गर्दा उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। टोक्यो, ओसाका, होक्काइडो को सामग्रीको तालिका अगस्टलेटमा यो याद राख्नुहोस् कि यो तातो हुन सक्छ र आँधीबेहरी कमलाको रूपमा यात्राको निर्णय पछि सकेसम्म चाँडो आउन सक्छ, टोकियो, ओसाका, होक्काइडो सूचना अगस्तमा यदि तपाईं योजना बनाउनुहुन्छ भने टोक्यो, ओसाका वा अगस्टमा होक्काइडोमा जानुहोस्, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र थप जानकारी हेर्न जानुहोस्। हामी यो मनमा राख्दछौं कि यो तातो हुन सक्छ र आँधीबेहरी आउन सक्छ ग्रीष्म Whenतुमा जापान यात्रा गर्दा उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र जस्ता जलवायुको बारेमा पर्याप्त सावधान हुनु आवश्यक छ। मैले जुलाईको बारेमा लेखमा यस बुँदाको सारांश दिएँ। त्यसो भए, यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, कृपया लेख पनि पढ्नुहोस्। जुलाई लेखमा सारांश दिइएका बुँदाहरू निम्न दुई छन्। सर्वप्रथम, दिनको अधिकतम तापक्रम प्राय: ex 35 डिग्री भन्दा बढि हुन्छ, त्यसैले तातो स्ट्रोकबाट जोगिन बारम्बार पानी पिउनु महत्त्वपूर्ण छ। एकै साथ, एयर कन्डिशनरले भवनको भित्री भागमा राम्रोसँग काम गर्ने भएकोले, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईलाई कार्डिगन ल्याउनहोस् ताकि शरीर चिसो नहोस्। दोस्रो कुरा, टाइफुन प्रायः जापानमा आक्रमण गर्दछ। त्यसो भए जापान जानु भन्दा पहिले मौसम पूर्वानुमानको बारेमा सावधान हुनुहोस्। यदि ...
यदि तपाई ग्रीष्म Japanतुमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने कस्तो किसिमको कपडा लगाउनु पर्छ? जापानको ग्रीष्म trतु क्षेत्रहरु जस्तै चर्को छ। आर्द्रता पनि उच्च छ। तसर्थ गर्मी को लागी तपाइँ चिसो छोटो बाहुला कपडा तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन गर्मीबाट बच्न सजिलो छ। यद्यपि वातानुकूलन भवनमा प्रभावकारी छ, त्यसैले कृपया कार्डिगन जस्ता पातलो कोटलाई नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा, म जापानी ग्रीष्म photos तका तस्विरहरूलाई पनि सन्दर्भ गर्नेछु र तपाईलाई कस्तो किसिमको कपडा तयार गर्नुपर्नेछ भनेर परिचय गराउनेछु। सामग्रीको तालिका गर्मी मा मँ टोपी वा प्यारासोल उदाहरणका लागि कपडा लगाउन सिफारिस गर्दछु ग्रीष्म wearतुमा के तपाई युकटा लगाउन चाहानुहुन्छ? गर्मीमा म जापानीमा टोपी वा प्यारासोल समर ल्याउने सिफारिश गर्दछु जापानमा होक्काइडो र होन्शुमा उच्च पहाडी बाहेक गर्मी वास्तवमै तातो र आर्द्र छ। कहिलेकाँही जुन जुन चिसो हुन्छ तपाईंलाई पातलो ज्याकेट चाहिएको छ। यद्यपि जुलाई र अगस्टमा यो सामान्यतया तातो हुन्छ र दिनको तापक्रम प्राय: 35 XNUMX डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ। तपाईंले उष्ण प्रदेशीय राज्यहरू जस्तै शान्त लुगाहरू तयार गर्नुपर्दछ। तपाई ब्यापार जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने पनि, जुलाई वा अगस्टमा तपाईलाई ज्याकेट लगाउने राम्रो अवसर हुँदैन, राम्रो रेस्टुरा वा भोजमा जानु भन्दा बाहेक। हालसालै जापानी मानिसहरु ज्याकेट ज्यादै धेरै व्यवसायमा लगाउँदैनन्। पुरुषहरूको लागि, अधिक व्यक्ति टाई लगाउन सक्दैनन्। किनकि सूर्य कडा छ, यसले प्राय पसिना बगाउँदछ, त्यसैले रुमालहरू अपरिहार्य हुन्छन्। जब तपाईं लामो समय बाहिर घर जानुहुन्छ, कृपया पनि लगाउनुहोस् ...
यहाँबाट, म पर्यटन स्थलहरू सिफारिश गर्नेछु जुन म ग्रीष्म Japanतुमा जापान यात्रा गर्दा सिफारिस गर्न सक्छु। मैले तपाईंलाई जापानको ग्रीष्म atmosphereतुको वातावरणको कल्पना दिन यस पृष्ठमा धेरै फोटोहरू र भिडियोहरू थपेँ।
यस भिडियोले मियाजीमा, हिरोशिमा प्रान्तमा प्रत्येक अगस्तमा आयोजित आतिशबाजी महोत्सव देखाउँदछ। गर्मी को समयमा जापान मा धेरै चाडहरु छन्। यी चाडहरुमा केहि मानिसहरु लाई परम्परागत किमोनो लगाउँदछन्। तपाईं प्रदर्शन वा घटनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन लामो इतिहासमा आयोजित गरिएको छ। तपाईं दृश्यहरू जापानी चाडहरूको लागि अद्वितीय देख्न सक्नुहुनेछ।
गर्मी मा, आतिशबाजी चाडहरु विभिन्न स्थानहरु मा आयोजित गरीन्छ। ती घटनाहरूमा धेरै जापानी मानिसहरूले परम्परागत किमोनो लगाउनेछन्, विशेष गरी युवा पुरुष र महिलाहरू। किन फायरवर्क फेस्टिवलमा सम्मिलित हुनुहुन्न र यस जापानी ग्रीष्म yourselfतुको मजा आफैंमा लिनुहोस्?
प्रतिनिधि जापानी ग्रीष्म festivतुहरु
निम्नलिखित चाड़हरू जापानको प्रतिनिधित्व गर्मी चाडहरू हुन्।
Ion जिओन फेस्टिवल (क्योटो शहर)
Om अओमोरी नेबुटा महोत्सव (अओमोरी प्रान्त अओमोरी शहर)
· हीरोसाकी नेपुटा फेस्टिवल (हीरोसाकी शहर, अओमोरी प्रान्त)
· सेंडाई तानाबाटा महोत्सव (सेंडाई शहर, मियागी प्रान्त)
· अकिता फलो लाइट फेस्टिवल (अकिता शहर, अकिता प्रान्त)
Wa अवा ओडोरी (टोकुशिमा शहर, टोकुशिमा प्रान्त)
प्रतिनिधि जापानी आतिशबाजी उत्सवहरू
प्रतिनिधि जापानी आतिशबाजी उत्सवहरू निम्न स्थानहरूमा आयोजित गरिन्छ। म गर्मीमा आयोजित प्रसिद्ध आतिशबाजी प्रदर्शन मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
· टोकियो (सुमिदा नदीको किनारमा)
· नागाओका शहर, निगाता प्रान्त
Se Ise शहर Mie प्रान्त
Is डेसन शहर, अकिता प्रान्त
होक्काइडो र होन्शु पठार आराम गर्दै = एडोब स्टक
गर्मी को लागी म तपाईंलाई सिफारिश गर्न चाहान्छु हक्काइडो र होन्शुको उच्च भूमि क्षेत्रहरू जस्तै नागानो प्रान्त। यी क्षेत्रहरू गर्मीमा तुलनात्मक रूपमा सुन्दर छन् र तपाईंको रमाइलोको लागि राम्रा फूलहरू प्रस्तुत गर्दछन्।
होक्काइडोमा, तपाई गर्मिमा कतै कहिँ पनि आरामसँग आफ्नो समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हुनशुको अग्लो ठाउँहरू जुन म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु निम्न हुन्।
· हाकुबा गाउँ, नागानो प्रान्त
· करुइजावा, नागानो प्रान्त
· कामिकोची, नागानो प्रान्त
बिहानको घाममा ताजा हरियो हप्पो पोखरी, यदि तपाइँ गोंडोला र लिफ्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यस पोखरीमा तुलनात्मक हिसाबले सजीलै बढ्न सक्नुहुनेछ = शटरस्टक
कब्ब्ल्ड मार्ग प्राय जसो 'हेप्पी भ्याली', करुइजावा, नागानो, जापान = शटरस्टकको रूपमा चिनिन्छ
गर्मी मा मियाकोजीमा। इराबू-जिमा = शटरस्टकको पश्चिमी किनारमा शिमोजीमाको शिमोजी एयरपोर्टमा फैलिएको सुन्दर समुद्रीतर्फ समुद्री खेलकुदको मजा लिइरहेका व्यक्तिहरू
अन्तमा, अन्तिम सुझाव म तपाईंलाई सिफारिस गर्न चाहन्छु ओकिनावा। ओकिनावा दक्षिणी जापानमा अवस्थित छ। यद्यपि यो मुख्य भूमि जापानको तुलनामा सानो टापु हो, यसैले समुद्रको हावाले चिसो हावा चल्छ र तपाईंको समय खर्च गर्न सहज स्थान बनाउँदछ। ओकिनावामा विश्वव्यापी रूपमा चिनिने धेरै सुन्दर समुद्री तटहरू छन्। ओकिनावाको मुख्य टापुको साथसाथै इशिगाकिजीमा र मियाकोजीमा जस्ता एक्लो टापुहरू पनि छन्। तपाईं त्यस्ता टाढा टापुहरूमा शान्तिमय प्रकृतिको पूर्ण आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ गर्मीमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ दुई चीजहरू छन् तपाईंलाई सचेत हुनको लागि। अत्यधिक मौसम अवस्था जस्तै होटवेभ र टाइफुनबाट सावधानी अपनाउनुहोस्।
जापानी ग्रीष्म ग्रीष्म ग्रीष्म asतु जत्तिकै तातो छ। यात्रा गर्दा, तपाईं तातो स्ट्रोकबाट बच्न सावधान हुनुपर्छ। जब बाहिर, कृपया हाइड्रेटेड रहन सम्झनुहोस्।
गर्मी मा, तपाईं मौसम मा छिटो परिवर्तनको लागि तयार हुनुपर्छ। यो गर्मी को समयमा जापान मा धेरै वर्षा हुन्छ र कहिले काँही धेरै भारी वर्षा गर्न सक्छ। यस्तो बेला आउँदछ जब टाइफुन जापानमा चल्नेछ। यस समयमा, रेल र हवाइजहाजले प्राय: ढिलाइ वा रद्दता अनुभव गर्दछ।
गर्मीमा जापान यात्रा गर्दा, मौसम पूर्वानुमानमा ध्यान दिनुहोस्। यदि आँधी आउँदैछ भने, बाहिरबाट आफूलाई खतरामा नपार्नुहोस्। तपाईंको समय घरको भित्री स्थानहरूमा खर्च गर्नुहोस् जस्तै तपाईंको होटल।
"प्रकृति संग सद्भाव" फिर्ता